ယူအက်ဖ်စီ - ၂၂၁ ကို လွဲချော်တော့မယ့် ၀စ်တိတ်ကာ - FOX Sports Myanmar
ယူအက်ဖ်စီ – ၂၂၁ ကို လွဲချော်တော့မယ့် ၀စ်တိတ်ကာ
သြစတေးလျနိုင်ငံသား ယူအက်ဖ်စီ မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံ ရောဘတ်ဝစ်တိတ်ကာ ဟာ ရေကျောက် ပေါက်ခဲ့တာကြောင့် သူ့ရဲ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအဖြစ် လုခ်ရော့ခ်ဟိုး နဲ့ထိုးသတ်မယ့်ပွဲစဉ်ကို လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။
၀စ်တိတ်ကာနဲ့ ရော့်ခ်ဟိုး ထိုးသတ်မယ့်ပွဲစဉ်ကို ယူအက်ဖ်စီ – ၂၂၁ အဖြစ်	လာမယ့်အပတ်အတွင်း ပါ့သ် မြို့မှာ ထိုးသတ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိချိန်မှာတော့ ၀စ်တိတ်ကာအစား ယိုးလ်ရိုမီရို က ရော့ခ်ဟိုးနဲ့ ထိုးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရောဘတ်ဝစ်တိတ်ကာကပြောကြားရာမှာ – “ ကျွန်တော် ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ဒီပွဲကို လွဲချော်ခဲ့တာပါ။ သက်သာလာဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး အဲဒီရောဂါသက်သာလာချိန်မှာပဲ ရေကျောက်ထပ်ပေါက်ခဲ့ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာတစ်ခုလုံး အခု အနီစက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါက တကယ့်ကိုစိတ်ရှုပ်စရာပါ။ လူတိုင်းဒီလိုခံစားရရင် တကယ့်ကိုကြောက်စရာပါပဲ။” လုို့ဆုိုပါတယ်။
Thanks so much to everyone that came last night and here’s to the people that missed out due to the centre closing ! Hope you can pick yourselves out ?? @ufc
A post shared by Robert Whittaker (@robwhittakermma) on Feb 1, 2018 at 2:27pm PST
ဒါ့အပြင် ၀စ်တိတ်ကာက ရိုမီရိုနဲ့ ရော့ခ်ဟိုး တို့ထိုးသတ်မယ့်ပွဲစဉ်မှ အနိုင်ရရှိသူနဲ့ ထိုးသတ်ရမယ်ဆိုရင် အဲဒီ ပွဲစဉ်ကိုလည်း ကြိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လုို့ဆုိုပါတယ်။
“ တကယ်လို့ အဲဒီပွဲက အနုိုင်ရတဲ့သူနဲ့ ထိုးသတ်ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ပျော်မိမှာပါ။ နံပတ်(၁)နဲ့ နံပတ်(၂) ဖိုက် တာနှစ်ဦး ထိုးသတ်မယ့်ပွဲပါ။ ဒီပွဲစဉ်ကို ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အားပေးပါတယ်။ ဒီပွဲကိုသွားကြည့်ချင်ပါ တယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ကျွန်တော့လိုပဲ ဒီပွဲကိုကြည့်ချင်နေမှာပါ။ ယိုးလ်ရိုမီရိုပဲ နိုင်မှာလား ။ ရော့ခ်ဟိုးပဲ အနိုင်ရမှာလား စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ ” လို့ ၀စ်တိတ်ကာက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Home Combat Sports UFC ယူအက်ဖ်စီ – ၂၂၁ ကို လွဲချော်တော့မယ့် ၀စ်တိတ်ကာ